INetpeak Checker: Uphando nge-Bulk ngeeNgingqi kwiiNdawo kunye neePhepha | Martech Zone
Izolo, bendidibene nenkqubo yokucebisa ebindicela ukuba ndibancede ekuqeqesheni abafundi babo ekusebenziseni iinjini yokukhangela. Umbuzo wokuqala endiwubuzileyo yayingu:
Ucinga ukuba yintoni i-SEO?
Umbuzo obalulekileyo kuba impendulo iya kukhokelela ekubeni ndingaluncedo na okanye hayi. Ngombulelo, baphendule ngelithi abanabo ubuchule bokuphendula lo mbuzo kwaye baya kuxhomekeka kulwazi lwam. Ingcaciso yam ye-SEO ilula kule mihla.
Ukulungiswa kweinjini yokukhangela ayisiyombono ngokudibeneyo yamaqela okulungiselela.
Ukulungiswa kweinjini yokukhangela ayisiyiyo eyokubuyela umva kubunjineli begunya lesizinda ukuzama ukujija ii-algorithms zokubeka ngcono.
Ukuphuculwa kweinjini yokukhangela ayisiyongqondo okanye imveliso yokukhohlisa injini yokukhangela ukuze uyibeke kwinqanaba.
Ukulungiswa kweinjini yokukhangela ayizizo iiphulo eziqhubekayo zokucela ezinye iisayithi ukuba zinxibelelane ngasemva.
Zonke ezi zinto zijolise kwinjini yokukhangela… hayi kumsebenzisi wophendlo.
Yintoni i-SEO: Khangela ukuSebenzisa koMsebenzisi
Ukusebenza kweinjini yokukhangela lixesha elidlulileyo kwaye ngenene kufuneka lisuswe kwisichazi-magama sentengiso yedijithali. Iinjini zokukhangela ii-algorithms ziyajonga, zithathe, kwaye zilungelelanise iziphumo ngokukhangela kuphando umsebenzisiUkuziphatha. I-algorithms iyaqhubeka ihlaziywa ngokusekwe kwindlela yokuziphatha komsebenzisi eqhubeka nokutshintsha.
Oko kuthetha ukuba izicwangciso zakho kufuneka ziqhubeke nokutshintsha kwaye zilungiselelwe ngokuhamba kwexesha. Kungenxa yoko le nto isantya sephepha kunye nokuphendula kweselfowuni kuqhuba ukuqhuba kule minyaka idlulileyo… kuba abasebenzisi bakwizixhobo eziselfowuni kakhulu kwaye banxunguphele kwindawo ecothayo!
Ukuba uza kwenza uPhuculo loMsebenzisi, konke malunga nophando onokuluqokelela kubaphulaphuli bakho nakukhuphiswano lwakho. Zixhobo ze SEO Qhubeka nokuphucula kunye nokubonelela ngetoni yezinto eziphambili zophando ukuze uchonge umxholo oqhuba umdla ukuze wakhe isicwangciso esingcono kakhulu sokuphuhlisa, ukubhala, ukuyila, kunye nokukhuthaza umxholo oza kuphumelela kwiinjini yokukhangela. umsebenzisi.
INetpeak Checker: Izixhobo zoPhando ze-SEO
Esinye isixhobo esikhuphuke ekuthandeni Umhloli weNetpeak, Isixhobo sophando esivela kwi-Software yeNetpeak enika ukuqonda ngaphezulu kweeparitha ezingama-384 ezinxulumene nesizinda okanye iphepha lewebhu. Isixhobo sedesktop esinceda ukuqhubela phambili kweinjini yokukhangela kwezi zinto zilandelayo:
Jonga iiparameter ezingama-380 + ezininzi ze-URL
Susa iGoogle, iBing, kunye neziphumo zophando zeYahoo
Uphando lweprofayile ye-backlink kunye nomgangatho wewebhusayithi kulwakhiwo lwekhonkco
Thelekisa ii-URL ngokweeparameter zeenkonzo ezaziwayo: Ahrefs, Moz, SerpstatMkhulu, Semrush, Njl
Vavanya abo ukhuphisana nabo
Hlaziya ubudala besizinda, umhla wokuphelelwa, kunye nokufumaneka kokuthenga
Hlaziya ukusebenza kweendaba kwimithombo yeendaba
Sebenzisa uluhlu lwee-proxies kunye neenkonzo zokusombulula i-captcha ngelixa usebenza inani elikhulu lee-URL
Gcina okanye uthumele idatha ukuze usebenze nayo nanini na ufuna
Isoftware ngoku ixhaswa kwiWindows eneenguqulelo zeMacOS kunye neLinux eza kungekudala.
Zama iNetpeak Software
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa ikhonkco lokudibana Isoftware yeNetpeak kule posi.
tags: Umvavanyi womnathaisoftware yeNetpeakindlela oziphethe ngayokhangela uphandoinyokaukukhasa kwenyokayakhe